Eragon | Myanmar Mp3 Album
Author Archives: Eragon
သို့– G&B Mixtape 2014
အချစ် အလွမ်း အကြမ်း တွေနဲ့စုံလင်အောင် သီကုံးထားတဲ့ ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်.။ Hip Hop Music New Album Mixtape အကုန်ဆုံးကြိုးစားထားပါတယ်။ ခံစားနားစဉ် ဝေဖန်ပေးကြပါအုံး….။ Download Here http://www.mediafire.com/download/5wnyp8nnffbf91o/Gang_Y_Master.rar Ovulation is the way to attract men “In lots of other species, there True Religion Jeans UK are very obvious indicators, but it has long been assumed that human females didn’t give off these cues. … Continue Reading →
August 14, 2014 Eragon အဆိုတော် (ကျား) Myanmar Artist New Myanmar Albums Leaveacomment
Ko Naw Chit (Sample) New Song …!!!
ကိုယ်ပိုင်သံစဉ် Rock သီချင်းလေးများဖြစ်ပြီး ကိုနော်ချစ် သီဆိုထားသော Sample New Song လေးများကို ခံစားနားဆင် အားပေးကြပါအုံး။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Phone Touch ပြီးတော့ Date လိုက်ပေါ့ Download Here မင်းအကြိုက် Style ဖြစ်ပေးမယ် Download Here ချစ်တက်ဖို့ ဖြစ်ပွားလာသည်။ Download Here BAND – THE BRIDGE STUDIO – GMI MIXING – YAW RAM
August 5, 2013 Eragon ၀ါသနာရှင် အခွေများ Myanmar Single Song New Myanmar Albums Unreleased Albums Leaveacomment
Ko Naw Chit
Underground Rock Band လေးတစ်ခုရဲ့သီချင်းလေးတွေပါ။ Rock ကြိုက်သူများ အတွက် အကြိုက်တွေ့ မဲ့သီချင်းလေးပါ နားထောင်ကြည့်ပါအုံး အဆိုတော် ကိုနော်ချစ် ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်ခံစားချက်လေးတွေပါ။ သီချင်း အပြည့်အစုံမပြီးသေးလို့Sample3ပုဒ်ပဲ တင်ပေးထားပါတယ်။ ခံစားကြည့်ပေးပါအုံး Rock ကြိုက်သူများအတွက်။ အကြွင်းမဲ့ ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ သူငယ်ချင်းမို့Mediafire Download
February 5, 2013 Eragon အဆိုတော် (ကျား) Unreleased Albums
Underground Rock Album အသစ်လေးပါ……သီချင်းလေးတွေက တော်တော်လေး ကောင်းပါတယ် ။ အောက်မှာ ဒေါင်းလို့ရပါတယ် အဆိုတော် Lann ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်လေးတွေပါ..။ Album Download >>http://www.mediafire.com/?ko5bxtvmuxdbq2b
January 16, 2012 Eragon New Myanmar Albums လန်း2Comments